As of Thu, 02 Apr, 2020 18:20
सभापति, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लगातार चौथो कार्यकालमा कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग समितिको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । २५ वर्षको उमेरदेखि नै व्यवसायमा होमिएका श्रेष्ठ पछिल्लो दशकमा आक्रामक व्यवसाय गरिरहेको व्यावसायिक घराना लक्ष्मी समूहका कार्यकारी निर्देशक हुन् । अटोमोबाइलसहित ट्रेडिङ, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संलग्न रहेको लक्ष्मी समूहले सेवा क्षेत्र (पर्यटन) मा पनि प्रवेशको तयारी गरिरहेको छ । युवा उद्यमी श्रेष्ठले नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका छन् । मुलुकको चेम्बर आन्दोलनमा आशालाग्दा युवा उद्यमीका रूपमा हेरिएका श्रेष्ठ महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगत उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । कोरोना संकटसँगै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको समग्र अवस्था, महासंघ निर्वाचन लगायतका विषयमा श्रेष्ठसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानी:
विश्वव्यापी कोरोना संकट बढिरहँदा नेपालमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ? खासगरी नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा कोरोनाले कस्तो असर पार्दैछ ?
कोरोनाको असर विश्वव्यापी भएसँगै नेपालमा स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पारेकै छ । अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पनि मानसिक असर देखिइसकेको छ । खासगरी सबैमा अन्योल छ कि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने । चीनपछि इटालीको समस्या देख्दा मानिसहरू त्रसित छन् । इन्डियामै पनि केही प्रभाव परिसकेकाले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । काठमाडौंकै सडक पहिलेभन्दा खाली देखिन थालिसक्यो । अघिल्लो हप्तासम्म होलीमा मानिस तराई गएर खाली भएको होला भनियो तर अहिले त झन् पातलो हुँदै गएको देख्दा कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रास निकै बढिसकेको देखिन्छ । जब बजारमा असर देखिन्छ भने व्यवसायमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिहाल्छ ।
कुन व्यवसायमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
अहिले असर परिसकेको क्षेत्र भनेको नै टुरिजम हो । होटल, रेस्टुराँ बार, एयरलाइन्स सबैजसो खाली नै छन् । मानिसहरूको मुभमेन्ट घट्दा उपभोग पनि घटाउँछ । फेरि यही बेला उपभोक्ता पनि सञ्चितितिर गए कि भन्ने पनि देखिएको छ । सरकारले पर्याप्त स्टक छ भनेर भनिरहेको छ । तर, पेट्रोलियम खाद्यान्न नुन चिनीलगायतमा चाप छ । हुन म त आफैं साल्ट ट्रेडिङको सञ्चालक समितिमा नै छु र हामीले जहिल्यै न्यूनतम ६ महिनाको नुन स्टकमा राखेका पनि हुन्छौं । अहिले त झन् ९ महिनालाई पुग्ने नुन छ, तर पनि उपभोक्ताले सञ्चितिमै जोड दिइरहेका छन् ।
अहिले मुख्यतया हवाई क्षेत्रमा आवतजावत घट्यो । सार्वजनिक यातायातमा पनि घटिरहेको छ । कोरोना अहिलेसम्म मुलुकमा आएको छैन भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । सार्वजनिक यातायातमा पनि यसले असर देखिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असरले पार्ने प्रभावलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ ?
नेपालमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता कम छ । हामीले अरु मुलुकमै निर्भर रहनुपर्ने भएपछि ति मुलुकको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेमा नै भर पर्छ । यसबाट सप्लाई चेनमा असर पर्छ र उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । भारतले ३० वटा औषधि निर्यातमा रोक लगायो र यसको कारण थियो— चाइनाबाट आउने कच्चा पदार्थ रोकिनु । नेपालमा पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि हामी पनि कच्चा पदार्थमा भारतसँगै निर्भर छौं । भारतले बन्द ग¥यो भने हामीमा असर पर्न सक्छ । अर्कातर्फ हाम्रा एउटै उद्योगमा ४–५ सय मजदुर काम गर्छन् । कतै संक्रमण देखियो भने के गर्ने भन्ने पनि चुनौती छ । अहिले अन्योल छ र सँगसँगै चुनौती बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।
औद्योगिक वा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा ल्याउने भनिएको पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण लगायतका सुविधाले भरोसा दिएको छैन र ?
हो, राष्ट्र बैंकले कन्फिडेन्स बढायो । केही नभएको बेलामा यो नै ठूलो कुरा पनि हो । हामी व्यवसायीलाई चुनौती सामना गर्न यसले ढाडस दिएको जस्तो लाग्छ । यद्यपि, भोलिका दिनमा हुने त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुछ । आज बोल्ने भोलि नहुने विगतका अनुभव दोहोरिनु भएन । यसका लागि कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
अहिल्यै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन र ?
तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । हालै मात्र एक मित्रले निकै इमोसनल कुरा गर्नुभयो– भोलि के हुने हो ? भौतिक सम्पत्ति त रहला तर हामी नै रहन्छौं कि रहँदैनौं ? यस्ता कुरा सम्बोधन गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्र पनि पर्यटनको यो संकटका बेला सहयोग गर्न तयार रहनुपर्छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा तथा ऋणको पुनर्तालिकीकरणलगायतका सुविधा पनि दिनुपर्छ । यससँगै ब्याजदर पनि हेर्नुपर्छ । होटल अहिले शून्य छ भने ब्याज नै तिर्न सक्दैन । बैंकले पनि ब्याज मिनाहा गर्न त सक्दैन किनकि ऊ त मिडियटर हो । त्यसैले सरकारले यसमा सम्बोधन गर्नुप¥यो । ब्याज तिर्ने चैत मसान्तलाई असारसम्म लैजाने कि अथवा अवस्था हेरेर त्योभन्दा पनि बढाउने भन्ने तत्काल निर्णय जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्र सुनको अन्डा दिने कुखुरा हो जुन अहिले बिरामी छ त्यसैले बचाउनुप¥यो । संकटका बेला सरकारको साथ जरुरी छ । रेस्टुरेन्ट, बार, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । तर यस्तो प्याकेजको निर्णय चैतको अन्तिममा गएर घोषणा गर्ने होइन कि बेलैमा हुुनपर्छ । असर परिसकेको क्षेत्रका क्षेत्रमा चैतको ब्याज असारसम्म दिन सकिन्छ । भूकम्पका बेला पनि गरिएकै हो ।
मनोबलको कुरा गर्नुभयो, कोरोना संकट बिर्सने हो भने अहिले व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ?
दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि मनोबल खस्केको अवस्था छ । वातावरणको कुरा भनौं, लगानीमैत्री वातावरण भाषण र कार्यक्रममै सीमित छ । हाम्रो कम्प्लायन्स नै बढी छ । धेरै नीति नियमले बाँधिएका छन् । आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर, हाम्रो आफ्नै सेल्फ एसेसमेन्ट छ यसको ‘फुल अडिट’ पनि छ । राजस्व अनुसन्धान छ । यतिले नपुगेर महालेखासम्म पुग्छ । हामीले कति ठाउँ जवाफदेही हुने ? सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आर्थिक त्रुटिलाई पनि राखिएको छ । आर्थिक त्रुटिमा आर्थिक दण्ड हुने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत यहाँ हामीलाई थुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हिजोका दिनमा ऐन पुराना थिए, बलियो सरकार चाहियो भन्यौं । यस्तो सरकार हामीले खोजेजस्तै आयो र ऐन नियम बलियो सरकार आए पनि हतोत्साही बनाउने खालका भए । हिजो दण्ड जरिवानामा ‘वा’ भन्ने थियो भने अहिले ‘र’ भएको छ । व्यवसायीलाई अलि टाइट गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । सिद्धान्तमा खुला बजार र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई मानिएको छ तर ऐनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।
अर्कातर्फ हामीले एक पटकलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्ने अधिकार देऊ भनेको हो, त्यो सुनिँदैन । शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई टेकेर हामीलाई त्रसित बनाइँदैछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको प्रतिबद्धता सह्रानीय पनि हो । आर्थिक रूपमा भएका गल्तीलाई अरू ऐनले निर्दिष्ट गरिरहेको छ भने त्यता किन लगेको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।
निजी क्षेत्रका संघ संगठनको भूमिका यस्तै समसया समाधानमा देखिनुपर्ने होइन र ? यसलाई हामीले निजी क्षेत्रको प्रभावकारिता कमजोर भएको भनेर बुझ्न सक्दैनौं ?
निजी क्षेत्र कमजोर भएको भनेर नबुझौं । हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । तर, सरकार आफ्नै बाटोमा हिँडेको महसुस गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्र निरुत्साहित यस्तै कारणले भइरहेको छ र लगानी घट्दै गइरहेको रिफ्लेक्सन देखिन्छ । निजी क्षेत्रका संघ–संगठन प्रभावकारी नभएका होइनन् । बारम्बार स्ट्रोंग्ली कुरा राखेका पनि छौं । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकाय माथिल्ला निकायमा गएपछि झन समस्या भएको हो । यसैले भोलिका दिनका लागि पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । अब भोलिका दिनमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर तयारी गरिरहेका छौं ।
निजी क्षेत्रका लागि प्रतिकूल रहेको यस्तै परिस्थितिका बीचमा तपाईं निजी क्षेत्रको माथिल्लो तहमा जाने तयारी गरिरहनुभएको छ । महासंघमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
म आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायभन्दा पनि समग्रमा निजी क्षेत्रलाई सक्षम र सबल सशक्त बनाउने मेरो प्रयत्न हो । हामीले व्यवसायीको हक हित तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि वातावरण बनाउने प्रयास गर्नेछौं । म एक्लैले होइन र महासंघ एक्लैले मात्र पनि होइन कि समूहगत लबिङ गर्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ । आफ्ना समस्या सही रूपमा सरकारलाई बुझाउने र सोहीअनुसार नीति नियमको व्यवस्था गर्ने सामान्य एजेन्डा हो हाम्रो । संगठनलाई यही कारण सशक्तीकरणमा लैजानुपर्छ र यसकै लागि मैले आफूलाई सक्षम र सबल ठानेको पनि छु । यसका लागि मेरो अनुभव, योग्यता र इमानदारितालाई निजी क्षेत्रकै पक्षमा भरपुर उपयोग गर्नेछु ।
निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण कसरी सम्भव छ ? यति धेरै धेरै संगठन छन् र नियामक निकायहरू भने निजी क्षेत्रमा फुटाऊ र राज गरको रणनीतिमा देखिन्छन् ?
हामी अब निजी क्षेत्रबीच फाटो ल्याउनेप्रति सजग छौं । अब निजी क्षेत्रबीच सहकार्य नै हुन्छ । विगतमा पनि महासंघले प्राक्टिस गरेकै हो । सबै संगठनसँग मिलेर अघि बढ्छौं । हामीबीच ठूलो भिन्नता नै छैन । शेखर गोल्छा नेतृत्वको महासंघले निजी क्षेत्रका सबै संगठनबीच सहकार्यको पहल तथा प्रयास गर्नेछ र तपाईंले चाँडै नै यसको रिजल्ट पनि देख्नुहुनेछ ।
अर्कातर्फ तपाईंले उम्मेदवारी दिन लाग्नुभएको वस्तुगत संघ संगठनबीच पनि उत्तिकै अन्तरविरोध देखिन्छन् नि ?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि संघ संगठन खुल्ने फेसनजस्तै बनेको पक्कै हो र त्यसको केही प्रभाव हाम्रो वस्तुगत संगठनहरूमा पनि देखिन्छ । अब सबै साथीहरूले परिस्थितिको मनन गरिरहनुभएकाले स्थिति फरक भइरहेको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । गलैंचाका संगठन एक भए, सुनचाँदीमै हिजोको जस्तो विवाद अहिले छैन । यसैले अब हामी एउटै हुनुपर्छ भन्नेमा भावना आइराछ । नम्बरले गनेरमात्र आफ्नो क्षेत्रको उपलब्धि हासिल हुने होइन । त्यसैले संख्यात्मक नभई गुणात्मक संगठन आवश्यक छ र त्यस दिशातर्फ हामी गइरहेका छौं । यसलाई व्यवस्थित गर्न चेम्बर कानुन जरुरी छ र महासंघले लामो समयदेखि यसको माग गरिरहेको पनि छ । सरकारले चेम्बर कानुन ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्र जति सबल र सक्षम हुन्छ त्यति नै चाँडो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छ । एसडीजीमा निजी क्षेत्रकै लगानी बढी अपेक्षा गरेको छ भने चेम्बर कानुन ल्याउन सरकारले नै सहयोग गर्नुप¥यो । निजी क्षेत्रलाई एक आपसमा भिडाएर हैन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न सकिए निजी क्षेत्रको योगदान अझै बढ्नेछ ।
महासंघ निर्वाचनमा तपाईंको जितका आधारहरू केके हुन् ?
म महासंघमा अप्रत्यक्ष रूपमा २० वर्ष र प्रत्यक्ष रूपमा १२ वर्ष निरन्तर संलग्न र सहभागी छु । यसबीचमा मैले राजस्व समिति, उद्योग समितिजस्ता महŒवपूर्ण मितिमा रहेर काम गरिसकेको छु भने सरकारका विभिन्न निकायमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर ऐन निर्माणमा पनि योगदान दिएको छु । उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन होस् वा राजस्वसम्बन्धी ऐनमा कुनै न कुनै रूपमा मेरो सहभागिता रहेकाले आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु । अर्कातर्फ आफैंमा २५ वर्ष व्यवसायको अनुभव पनि छ । यसमा पनि विविधिकृत व्यवसाय रहेको छ । उत्पादनमूलक, कृषि, ट्रेडिङमा छौं । पर्यटनमा लगानी गर्दैछौं, ऊर्जामा दुई परियोजनामा लगानी गरिसकेका छौं । यसरी विविधीकरण गर्दै अगाडि बढिरहेको तथा संस्थामा पनि रहेको दुवै अनुभवका आधारमा मैले नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । अर्कातर्फ मैले जहाँ जस्तो भूमिका पाएँ त्यहाँ आफ्नो नेतृत्व क्षमतासमेत प्रमाणित गरेको छु भन्ने लाग्छ ।
वस्तुगततर्फका बहालवाला उपाध्यक्षसँगै चुनाव लड्नु कत्तिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुभएको छ ?
निश्चय पनि चुनौती छ । तर, मलाई के विश्वास छ भने वस्तुगत संघका सबै साथीहरूले आफूले जिम्मेवारी पाएको समयमा कसले के ग¥यो भनेर हेर्नुहुनेछ । वस्तुगतमा सबै नेतृत्व क्षमता भएका र संस्था संगठन हाँकिरहेका साथीहरू हुनाले विवेक प्रयोग गरेर सही निर्णय गर्नेमा म विश्वस्त छु । मैले आफ्नो क्षमता कार्यक्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघमा देखाइसकेकाले उहाँहरूले यसलाई मनन गर्नु नै हुनेछ । यसैले म विश्वस्त छु ।
१२ वर्षअघि कार्यकारिणी समितिमा चुनिँदा तपाईंसहित पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा र सौरभ ज्योतिलाई महासंघ हाँक्ने सम्भावना बोकेका युवा भन्ने गरिन्थ्यो, तर यो बीचमा मुरारका निवर्तमान अध्यक्ष भइसक्नुभयो गोल्छाले अध्यक्षको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं र ज्योतिचाहिँ बल्ल उपाध्यक्षको दौडमा हुुनुहुन्छ । आफू ढिलो भएजस्तो लाग्दैन ?
आजभन्दा १२ वर्षअघि नै हामीलाई नेतृत्वको सम्भावनाका रूपमा हेरिएको रहेछ, जुन आज प्रमाणित भइरहेको छ । त्यसैले हिजोका दिनमा जो–कोहीले यसरी विश्लेषण गरे उनीहरू सही रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । नेतृत्वमा सबै एकैपटक आउन सक्दैनन् र त्यसमा हुने ढिलोचाँडोलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने पनि हुन्छ । धैर्य गर्दा समयले सबैलाई मौका दिन्छ । तपाईंले नाम लिनुभएको हामी चार जनामध्ये कसैले पनि एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गरेनौं । त्यसैले म यो भन्न चाहन्छु कि हिजोका दिनमा जसले यस्तोा सोचे त्यो दूरदर्शी सोचाइ हो र आज हामीले यसलाई मूर्त रूप दिँदैछौं ।
तपाईंहरूपछि त महासंघमा युवाका लागि बार लगाएजस्तै भयो, युवा पुस्ताको आकर्षण किन बढेन ?
युवा आकर्षण नबढेको होइन । आज पनि जिल्ला उवासंघमा पनि युवा छन्, वस्तुगतमै पनि कतिपय युवाले नेतृत्व लिइरहेका छन् भने एसोसिएटमा त युवा नै बढी छन् । यो वर्षको आकांक्षी हेर्ने हो भने युवाकै जमात बढी छ । तपाईंले भनेजस्तै एकैपटक युवा धेरै नदेखिए पनि क्रमशः विस्तार भइरहेको छ ।
अर्कातर्फ ठूला घरानाले पनि महासंघमा नयाँ पुस्तालाई पठाएनन् भनिन्छ ?
हामीले यस्ता युवालाई महासंघमा ल्याउन मोटिभेट गरिरहेका छौं । गत वर्ष पनि गरेका थियौं र यस वर्ष पनि गरेका छौं । मैले नै पनि व्यक्तिगत रूपमा पहल गरिरहेको छु । यस वर्षको एसोसिएटमा टिम हेर्नुभयो भने तपाईंले पनि देख्नुहुनेछ । अर्कातर्फ धेरै युवा वेटिङमा पनि छन् । एनवाईइएफ पनि सशक्त बन्दैछ र भोलिको महासंघ यसैबाट आउने हो । भोलिको दिनमा यसका अध्यक्ष महासंघमा पदेन हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि छ । युवा मात्र नभई महिलालाई पनि सशक्तीकरणमा लैजाने हाम्रो तयारी छ । महासंघमा युवासंघै महिला सहभागिता पनि बढ्नेछ ।
तपाईं हिजोका चुनावमा आफ्ना लागिभन्दा पनि अरूलाई जिताउन बढी लाग्नुहुन्छ भन्ने टिप्पणी हुन्थ्यो । यसपालि आफैं पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भने अरुका लागि क्याम्पेन गर्दा र आपैंm मैदानमा जाँदा कत्तिको फरक हुँदो रहेछ ?
हिजाको दिनमा म जुन टिममा लागेँ, दत्तचित्त भएर लागेँ । त्यो मेरो इमानदारिता र विश्वसनीयताको उपज पनि हो । डेडिकेसन पनि हो । अहिले मलाई के विश्वास छ भने हिजो लागेको टिमले मलाई आज सहयोग गर्नेछ । मलाई हिजोको दृढताले फाइदा नै गरेको छ । यद्यपि, आफैं लड्नुमा केही फरक छ, प्रेसर बढी छ । तर, मैले नेतृत्वमा पुगेका सबैजसोसँग गरेको सहकार्य र अभ्यासले मलाई खारेको पनि छ । अनुभव र पाठले मलाई सजिलो पनि बनाएको छ ।